URIHANNA WAYENGUMTSHAKAZI EMTSHATWENI: BUKELA IDODGE YAKHE KWIBOUQUET TOSS - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato URihanna Wayengumtshakazi eMtshatweni kwaye wayephepha i-Bouquet Toss
URihanna wayengumtshakazi kumtshato ka-Agasti 2018 womhlobo wakhe osenyongweni. Apha, ubonakala kwi-Met Met Gala ngo-2015 kwi-NYC. (Shutterstock.com)
Ngu: Esther Lee 08/20/2018 ngo-12: 15 PM
URiRi wayekhona ukukhonza-hayi ukubamba. Kule mpelaveki, i-R & B superstar URihanna uchithe ixesha elisemgangathweni eBarbados ukuba abe ngumolokazana emtshatweni womnye wabahlobo bakhe abasenyongweni, USonita Alexander .
efikelelekayo kuzo zonke iiphakheji zekhefu lomtshato e-usa
Inkqubo ye- Ulwandle lwesi-8 Umlingisi kunye nomdlali ophumelele iGrammy kangangezihlandlo ezisibhozo uthumele imizuzwana embalwa ngaphakathi kunye nomtshakazi ngentsasa yomtshato ngelixa iqela lilungiselela ukubuya. Xa ixesha lomsitho lifikile, imvumi yayikho ngokugqibeleleyo kwaye ikulungele ukwenza imisebenzi yayo.
Iifoto ezivela ngaphakathi kumtshato zitshengisa umbethi weengcinga zasendle-ngee-tresses zakhe ezibuyiswe zintle, zingenayo i-frills, iphone yangaphantsi-enxibe isafire gown eluhlaza enemikhono ejijekileyo yemikhono njengawo onke amanye amalungu omtshato. Ngelixa umtshakazi nomyeni behla kwiglasi enesipili segolide, umseki weFenty Beauty ngokusesikweni wabuya umva kwisindululo somnyhadala njengamanye amalungu omtshato.
Umtshato eparadesi kunye noRihanna njengentombi yomtshato yi-fairytale Congrats @sonitalex x @ rjtwalker85 #justmarried… #barbados #rihanna #badgalriri #goat #she #bridesmaid #bajan #beauties #beautiful #bridaldress #happywedding #caribbeanyt #uyolo #bff #rp @nikitatmitchell @roseia #tag ukuba uyabazi abanye
Iposi ekwabelwana ngalo ngu Ithoba ibhola (@ she_rrf) nge-Aug 20, 2018 kwi-8: 16 am PDT
Nangona kunjalo, elinye lamaxesha wentsholongwane avele kumtshato wawusuka kulwamkelo ngokwalo. Umntu owayeme wayithimba indlebe yeendwendwe, kubandakanywa neempelesi, zikroziwe zinethemba lokubamba isipha kumgangatho wokudanisa. Umculi, nangona kunjalo, wayemi ngasemva kwaye efihlile ngenjongo ukuba abambe isipha njengoko kubonakala kumfanekiso.
Intombazana encinci kaRihanna wayedada xa umhlobo wakhe osenyongweni ephosa isipha somtshato pic.twitter.com/kTLqjcJNYH
- (@mashumi amabini) Nge-19 ka-Agasti ka-2018
Eli yayingeloxesha lokuqala likaRi ekhonza njengomtshakazi. Wayenokuziqhelanisa nokuqala ngo-Epreli 2015, xa wayekwangumtshato wabatshati kumhlobo wakhe eHawaii.
UAlexander, ugqirha, ungomnye wabadala bemvumi ezindala.
Khusela umbono wakho ofanelekileyo womtshato ngokuqala ngawoUhlobo lweKnot's Quiz, apha.
Iingubo zokubeleka kumtshato wehlobo
ilokhwe ende oza kuyinxiba emtshatweni
uzonxiba ntoni emtshatweni madoda
iilokhwe zomtshato ezingaqhelekanga zentwasahlobo
isipho somtshato sonyana ovela kunina